Addunyaa Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa
Oromoof barri 2016 kan garajabeennaa fi ukkaamsaan keessatti daangaa ce’e ta’uu isaa HRW ibse
Ganama har'aa, barii barraaqaa, hidhattoonni kudhan hoteela Radisson Blu Hotel magaalaa Bamakootti, Maalii, argamu humnaan seenuudhaan namoota hoteela keessa jiran 170 iggituun isaanii gabaafameera....
Admin - Nov 17, 2015 0
Xayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiin ta'uu Ruusiyaan beeksiste. Hanbaan dhukaatuu ykn boombii qaama xayyaaricha caccabee fi meeshaa imaltootaa irratti argameera. Mataan humna...
Shororkaa suukkanneessaa eda magaalaa Paariis, Faransaay, liqimseen hanga ammaatti lubbuun namoota nagaa 120 galaafatameera. Namoonni 200 madoo ta'uun gabaafameera. Kanniin madaayan keesaa haalli namoota 80 yaachisaadha. Halkan...
Fira - Nov 12, 2015 0
Gamtaan Awurooppaa baqa ardii Afrikaa irraa gara Awurooppaatti godhamu hanbisuuf kan oolu gargaarsa doolaara Aeerikaa biliyoona 2 Afrikaaf waadaa seene. Kallattiin xiyyeeffannaa baqa hanbisuu...
Filannoo Dilbata kaleessaa Miyaanmaar keessatti geggeeffameen mootummaan abbaa irree (bulchiinsi humna woraanaa) kumee hedduuf biyyattii bulchaa ture injifatamiinsi hamaan isaa mudatuu amane. Bu’aan filannoo hanga...
Abdiisaa - Sep 17, 2015 0
Humni ittisa Burkiinaa Faasaa mootummaa cee'umsaa biyyattii irratti fonqolchaa geggeessuu isaa ifa taasise. Humni woraanaa tankaarfii kana mootummaa cee'umsaa Kanfaadoo irratti kan fudhate filannoo...
Admin - Sep 10, 2015 2
Gurri oduun baqattoota Sooriyaa irraa gara Awurooppaatti ce'anii hinseenne, ijji gidiraa baqattoota Awuroppaa seenuuf yaalii godhan irra gayu hinargine jiraa laat? Oduun gaddaafi shororkaa...
Nationwide-wide electrical outages nearly shut down Africa's largest economy before the inauguration of President Muhammadu Buhari in late May. But now the lights are...
Namoonni sadi fooliin shorbaa gandaa ganamaan nujeeqe jedhan gara mana shorbaan keessaa urgaayuutti qajeelan. Mana shorbaan keessatti qophaayaa ture seenuudhaan ibidda irraa shorbaa fudhatanii...
Oduun galaana Mediteraaniyaan silaa dhuma hinqabu. Dooniin baqattootaa Liibiyaa gadi lakkifte gara handaara galaana Xaaliyaaniitti qajeelte nagaan Xaaliyaanii gayuu hindandeenne. Doonii baqattoota humna isii...